Spain oo ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group B, xili Portugal uu barbaro la galay xulka qaranka Iran – Gool FM
Spain oo ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group B, xili Portugal uu barbaro la galay xulka qaranka Iran
Dajiye June 25, 2018
(Russia) 25 Juunyo 2018. Kulanka oo ahaa Mid aad u xiiso badan ayaa waxaa uu u dhaxeeyay xulalka Iran iyo Portugal waxaanayna labada xul kusoo xirteen kulanlkooda saddexaad ee Group-ka B.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xiiso badan ee ah weerar iyo weerar celis waxaana qeybta koowaad lagu kala baxay 1-0 uu ku hogaaminayay xulka qaranka Portugal.
Goolka xulka qaranka Colombia ayaa yimid daqiiqadii 45-aad waxaana u dhaliyay Ricardo Quaresma, kaasoo hogaanka u dhiibay xulkiisa kana dhigay ciyaarta 1-0 kahor dhamaadka qeybtii koowaad. Kadib markii uu caawin aad u qurub badan ka helay Adrien Silva,
Labada dhinaca ayaa helay fursado dhowr ah ay shabaqa ku gaaro kareen inta ciyaarta socotay, isla markaana aan lakala marin qeybtii nasashada, balse ugu dambeyn waxaa labada dhinaca ay ku kala nasteen 1-0 uu ku hogaaminayay xulka Portugal.
Qeybta labaad markii la isku soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyareed aad loo jecleestay, waxayna sameeyeen kubado weerar iyo weerar celis ahaa.
Daqiiqadii 53-aad ee qeybtii labaad ciyaarta ayaa garsoorka wuxuu xulka Portugal ku abaa mariyay rigoodhe, waxaa qabsaday Cristiano Ronaldo balse wuxuu ku guuldareestay inuu gool u badalo Cristiano ayaana fursadaas iska qasaariyay.
daqiiqadii 90-aad ee dhamaadka ciyaarta xulka Iran ayaa helay gool rigoodhe ah waxaana u dhaliyay xidiga Karim Ansarifard oo ciyaarta ka dhigay 1-1.
Laakiin ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-1 waxayna Portugal kaalinta labaad kaga soo baxday ee group B halka Spain ay ku dhameysatay kaalinta koowad.
Dhanka kale xulka ka haray Group-kan ee Morocco iyo Spain ayaa kulankoodii wuxuu kusoo idlaaday 2-2
Waxaa goolka hore la hormartay qaranka Morocco kadib markii daqiiqadii 14-aad uu u dhaliyay Khalid Boutaib.
Laakiin xulka qaranka Spain ayaan ku dhibtoonin inuuhelo goolka barbaraha waxaana daqiiqadii 19-aad goolka u dhaliyay Isco, kadib markii uu caawin buuxda ka helay Andres Iniesta
Markale xulka Morocco ayaa hogaanka qabtay waxaana u dhaliyay goolka Youssef En-Nesyri daqiiqadii 81-aad kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-1, kadib markii uu caawin ka helay Faycal Fajr,
Laakiin xulka Spain ayaa markale la yimid goolka barbaraha daqiiqadii 90-aad Iago Aspas, kadib markii uu baas qurux badan ka helay Daniel Carvajal.
Muxuu ka yiri Salah ka haridii xulka Masar ee koobka adduunka?
Yaa loo doortay laacibkii ugu fiicnaa kulankii barbaraha ku soo idlaaday ee Iran iyo Portugal?